Kandidà ben’ny Tanàna: nihemotra tamin’ny ora farany Ravalomanana | NewsMada
Kandidà ben’ny Tanàna: nihemotra tamin’ny ora farany Ravalomanana
Randriamasinoro Tahiry Ny Riana. Io no kandidà voalaza fa hitondra ny fanevan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) amin’izao fifidianana ben’ny Tanàna Antananarivo Renivohitra izao. “Olom-baovao”, araka ny voalaza tokoa satria tsy dia be mpahalala manao ahoana loatra. Eny, fa na dia tao amin’ny antoko Tim izay nanolotra azy aza.
Araka izany, tsy ho Ingahy Ravalomanana indray, araka ny efa novoizina andro vitsivitsy izay no ho kandidàn’ny Tim. Ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia (RMDM) moa no hoe nanolotra azy. Omaly ihany dia efa nandeha ny fanehoan-kevitra maro. Raha akapoka, maro no kivy sy diso fanantenana.
tamin’izao tsy firotsahan’ny mpanolotsaina manokan-dRamatoa vadin’ny ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana izao.
Asa, fantany sy tsapany fa be loatra ny fanamarihana sy ny tsikera mivaivay nandritra ny fitantanan-dRamatoa vadiny ity tanànan’Antananarivo Renivohitra ity. Tsy afa-miala amin’izay rahateo ny tenany, amin’ny maha mpanolotsaina manokana ny vadiny azy. Mazava fa tsy te hanampy trotraka izany lesoka goavana izany indray Ravalomanana, indrindra amin’izao, azo lazaina hoe, famaranana ny fotoana ahazoany manao politika izao. Koa dia naleony nanolotra ity sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo ity.